Ngwọta nye Oneplus 2 melite nsogbu site na OTA | Gam akporosis
Ngwọta nke Oneplus 2 melite nsogbu site na OTA
Francisco Ruiz | | OnePlus, Nkuzi
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị nkeji ole na ole gara aga ka anyị bipụtara nyocha zuru ezu na nyocha nke Oneplus 2, Otu n’ime ihe atụ ndị kachasị atụ anya n’afọ ahụ, anyị na-anata ajụjụ banyere ama ama Oneplus 2 melite nsogbu site na OTA, nsogbu na-eme na ụfọdụ ọnụahịa zụtara na weebụsaịtị ndị na-abụghị ndị ọrụ gọọmentị Oneplus,
Na ọkwa ọhụrụ a dị ka nkuzi bara uru, ọbụlagodi na enyemaka nke vidiyo na-akọwa, aga m akuziri gị otu esi dozie nsogbu Oneplus 2 site na OTA, itinye mmelite ohuru a natara site na nbudata ya na aka ma tinyekwa ya na aka, nke ọ gaghị emetụta akwụkwọ ikike gọọmentị nke ọnụ ya.
1 Kedu ihe kpatara mmelite OTA anaghị arụ ọrụ maka Oneplus 2 m?
2 Otu esi edozi Oneplus 2 melite nsogbu site na OTA
Kedu ihe kpatara mmelite OTA anaghị arụ ọrụ maka Oneplus 2 m?
Ihe kpatara ya Mmelite OTA anaghị arụ ọrụ n'ụdị ụfọdụ Oneplus 2, bụ ihu ọma na ụdị ndị a nwere ike ịbụ na e mebiri, na-enweghị ebumnuche a na-amaghị, site na ụlọ ahịa ndị China na-ere ahịa na Oneplus 2.
Ọ bụrụ na Oneplus 2 anyị chọtara mmelite ọhụrụ nke ihe dị ka 40 mb na ibu, nbudata na n'oge ịmalitegharị ya maka nrụnye, ọ na-eweghachi anyị ozi nke nwụnye melite, ihe kachasị nchebe bụ na anyị nwere Oneplus 2 gbanwere site na otu n'ime ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ndị e kwuru n'elu na-ere ha na-enweghị mkpa akwụkwọ ịkpọ oku. Nkọwa nke ga-enye anyị akara ngosi na agbanweela ya bụ ntinye nke a ochie mbipute nke gị tube ngwa, nke na-arụ ọrụ dị ka ịnyịnya ibu na ọ naghịdị ekwe ka anyị melite ya ma ọ bụ n’ezie iwepụ ya ebe ọ bụ na ọ gụnyere na usoro.
Ọzọ, dị ka m na-akọwa na vidiyo etinyere na isi nke isiokwu a, m ga-enye gị faịlụ gọọmentị maka hichaa Oneplus 2 anyị kpamkpam, na mgbakwunye anyị ga-emelite ya na ohuru nke Oxygen OS 2.0.1 enwere ike idozi nsogbu ndị ahụ enweghị atụ dị ka nke Ọnụ ụzọ Certifi. Oh na ihe a niile na-efunahụ nkwenye gọọmentị nke ngwaahịa ahụ ma hapụ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi iji nweta mmelite n'ọdịnihu site na OTA n'enweghị nsogbu !!.
Otu esi edozi Oneplus 2 melite nsogbu site na OTA
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ budata ngwa ngwa kachasị ọhụrụ ewepụtara ozugbo site n'aka Oneplus maka Oneplus 2 gị kpọmkwem site na njikọ ana. Nke a bụ Rom zuru ezu na femụwe Oxygen OS 2.0.1 dabere na Android 5.1.1 Lollipop na ọ ga-ehichapụ Oneplus 2 anyị kpamkpam site na ntinye aka nke ụlọ ahịa ndị a na-ere ahịa na China, n'otu oge ahụ na ọ ga-edozi adịghị ike nke Stagefright na Certifi-Gate, yana ga-edozi nsogbu nke mmelite site na OTA maka ọdịnihu.
Ọ ga-kwuru na nke a ukara femụwe ọ gaghị adabaghị na ukara akwụkwọ ikike akwụkwọ ikike nakwa ihe ga-asọpụrụ ngwa anyị arụnyere na data sistemụ ugbu a.
Ozugbo ebudatara oxygen OS 2.0.1 ngwa ngwa maka Oneplus 2, anyị ga-enwe naanị detuo ya na enweghi nkpochapu na folda Downloads nke Oneplus 2 ma soro usoro nke m na-egosi na vidiyo etinyere na isi nke post a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » OnePlus » Ngwọta nke Oneplus 2 melite nsogbu site na OTA
Ihe 13 kwuru, hapụ nke gị
Enwetara m njehie mgbe m na-achọ iwepụ ya
Zaghachi na pepelradio
Ebudatara m faịlụ ahụ, naanị otu ka ebudatara na ọ bụghị abụọ dị na vidiyo. M arụnyere ya na ugbu a ọ bụrụ na m nwere nsụgharị nke oxygen OS 2.0.1 mana ekwentị ka nwere ike ibudata ya site na ota, ana m ebudata ya ma enweghị m ike ịwụnye ya.
Udochukwu Nwachukwu (@ MRTW80) dijo
Agbasoro m usoro niile ma dị mma, mana ọ na-agwa m na enwere m mmelite na-echere nke 8.9mb (¿¿???) na mgbe m gwara ya ka ọ melite ọ dara ọzọ dị ka ọ dị na mbụ (¿¿???) E wezụga na asụsụ mba ọzọ efunahụ m (dịka ọmụmaatụ Lithuania adịghị ebe ahụ ugbu a)
Zaghachi Mister Lip (@ MRTW80)
Ebudatara m faịlụ ahụ, naanị otu ka ebudatara na ọ bụghị abụọ dị na vidiyo. nke na-adighi ebudata m bu oneplus2oxygen_14.zip. Ọ na - enyere aka ịme ya naanị na nke na - ebudata m ma ọ bụ ka ọ ga - abụ ma ha abụọ?
Daalụ maka post gị
M soro niile nzọụkwụ na nnọọ ezi.
Mana mmelite ohuru a ka na adighi, mgbe imelite. Have nwere ihe ọ bụla echiche ihe mere ọ pụrụ ime?
Zaghachi ka bea
Ọ bụ m ọzọ ... [SOLVED] Mgbe ị wụnye zuru ROM, chere ka ngwa niile melite. Mgbe ngwa ahụ rụsịrị wụnye, melite nwelite ahụ. NA VOILÁ! Ọ dịghị nke tampered ROM. Daalụ maka enyemaka gị!
Onyeka onwenu (@onyekaonyeonyeonye) dijo
Daalụ, na-ekele gị nke ukwuu maka ịlaghachi na ịkọwa ha bea, n'ihi na otu ihe ahụ mere m, m wee gụọ gị ma tụgharịa ya dịka ị kwuru, na-emelite ngwa ndị ahụ.
Daalụ nke ukwuu…
Zaghachi JavierRamos (@CurranteLiberal)
Bea, ibudatara faịlụ 2 ahụ? Nwere ike ịkọwa etu i si mee nke ọma?
Azụrụ m ekwentị m site na ịkpọ oku mgbe ọ bịara imelite ekwentị m pịa ya, ọ bịara ịwụnye, m nyere ya wụnye, mana ekwentị ahụ nọrọ na triangles na wiil ihe dị ka elekere abụọ ma ọ nweghị ihe ọ bụla.
Ejiri aka kpochie ekwentị, gịnị ka m ga-eme?
Naanị m na-ebudata otu faịlụ, enwere m ike ịme ya naanị otu? ma obu ebe m ga ebudata nke na acho m?
Edozi ya, iji otu faịlụ zuru ezu ịhapụ OP2, naanị ị ga - eme ihe akọwapụtara na vidiyo ahụ, ozugbo emechara ya, ị ga - echere ngwa niile nke ngwaọrụ ahụ ka emelitere, ọ bụrụ na ọ naghị eme ya na-akpaghị aka, ị banye na ngwa ngwa egwu egwu wee chọọ nhọrọ nke ngwa na egwuregwu m, ozugbo n'ime, pịa melite ihe niile ma ọ bụ ya. The OTA ebudatara dị ka ọ dị na mbụ na ekwentị ga-imelite enweghị isi nsogbu.
Ndewo onye ọ bụla! Enwere m ajụjụ dị mkpa. Ọ bụrụ na enwere m OxygenOS 2.1.0, kedu ka m ga esi eme ya? Nke ahụ bụ, m ga-etinye OxygenOs 2.0.1? Ma ọ bụ ka m ga-etinye otu mgbe 2.1?
Eugene 21 dijo
Nnọọ. Azụrụ m mobile na gearbest otu ọnwa ma ọ bụ karịa gara aga, ụdị m nwere nke Oxygen bụ 2.1.0, mana ọ na-enye m njehie na mmelite ahụ na 2.2.0. Ọ bụ otu ihe ahụ? Ọ na-ebudata m, mgbe ọ wụnye ya na-agbanye m, ọ na-enyekwa m njehie. Abụọ ọ bụla site na atọ m na-enweta mgbasa ozi na ihuenyo. Ọ bụrụ na m mee ihe ị na-ekwu, m na-atụfu data m nwere na ekwentị m (foto, egwu ...) ???
Daalụ na ekele kacha mma
A ga-enyefe Moto 360 2015 ọhụrụ na Septemba 8
Nyocha na nyocha nke Oneplus 2